कृषकहरूलाई निःशुल्क औजार वितरण गर्नुका साथै औजार चलाउने तालिम समेत दिईएको छ । बारी खन्न र जोत्न र घाँस काट्न प्रयोग गरिने आठ–आठ थान औजारहरूको खरिद गरी वितरण गरिएको अध्यक्ष शेर्पाले शेर्पाखबरलाई जानकारी दिए । औजार खरिद र ढुवानीका लागि वडाले आ. ब. ०७४÷०७५ मा २० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो । कार्यक्रममा खुम्बु पासाङल्हामू गाउँपालिका वडा नं ५ का वडा सदस्यद्धय मिङमा नुरू शेर्पा र आङ माया शेर्पाको पनि उपस्थिती रहेको थियो ।
औजार पाएपछि कृषकहरुले आधुनिक तवरले छिटो छरितो रुपमा खेती लगाउन आफूहरुलाई सहज हुने भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।